क्रिस्पी बेक्ड चिकनका जाँघहरू every प्रत्येक पटक उत्तम} - व्यंजनहरु
कति कपहरू पकाइएको चामलमा चामल पकाएन
फ्रिज भएको तरकारीको साथ झिंगी मासा फ्राई
कसरी ह्याम शान्क गर्ने
बेक्ड चिकनका फिलाहरू
बेक्ड चिकनका फिलाहरू एक स्वादिष्ट र धेरै साधारण मुख्य पकवान हो। यी कुखुराको फिलामा एक उत्तम कुरकुरा छाला र अतिरिक्त रसिलो मासु छ! तिनीहरू सँगसँगै उत्तम रूपमा प्रस्तुत छन् मसलेको आलु वा Scalloped आलु ।
भोको भीडलाई खुवाउन ठूलो ब्याचलाई कुक गर्नुहोस्, तपाईंको मनपर्नेमा थप्नुहोस् घरेलु चिकन नूडल सूप वा अर्को खानाको लागि बचेको चीज फ्रिज गर्नुहोस्। ओभन पकाइएको कुखुराको जांघ चार महिनासम्म स्थिर रहन सक्दछ। भर्खर पग्लनुहोस् र पुनः ताप्नका लागि पन्नीमा लपेट्नुहोस्।
कुखुराको फिला हड्डी भित्र र छालामा वा बेडलेस र छालाविना बेचिन्छ। ती गाढा मासुले उनीहरूलाई थप स्वाददार बनाउँदछ, उनीहरूसँग बढी फ्याट हुन्छ जसले सुनिश्चित गर्दछ कि तिनीहरूले रसदार र स्वादिष्ट बनाउँछन्। जांघहरू भन्दा माफ गर्नुहोस् कुखुरा स्तन जुन सजिलैसँग overcooked गर्न सकिन्छ।
यस नुस्खामा, म छाला रोज्छु (किनकि यसले अद्भुत स्वाद दिन्छ र कुखुरालाई अत्यन्त रसीला बनाउँछ)। हड्डीमा पकाएको कुनै पनि मासुको रूपमा यसको स्वाद धेरै छ। मलाई कुखुराको मौसम प्रयोग गर्न मनपर्छ वा इटालियन मसाला यो नुस्खा मा, तर यो आफ्नो स्वाद को अंकित गर्न को लागी स्वतन्त्र महसूस को लागी!
कुखुरा मौसममा म या त मेरो आफ्नै मिश्रण सिर्जना गर्दछु (जसरी मैले मेरोमा छर्कन्छु भुनी चिकन ) वा मनपर्ने खरीद गर्नुहोस् कुखुराको रग मिश्रण ।
कसरी कुखुराको जाँघो पकाउने
जिलिससेट ओभन बेक्ड चिकनको फिलाका लागि, हड्डी इन छाला र छनौट गर्नुहोस्। छाला राम्ररी टुक्रिन्छ, र हड्डीले अधिक स्वाद प्रदान गर्दछ जबकि मासुलाई चिसो राख्दछ। एक उच्च तापमान छालालाई कुरकुराउन मद्दत गर्दछ (मेरो मनपर्ने भाग)।
चिकनको फिलामा सजिएको बेक्ड हड्डीका लागि यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
कागजको तौलियाको साथमा प्रत्येक फिला सुक्खा पार्नुहोस्
कुखुराको भाँडामा कचौरामा राख्नुहोस् र जैतूनको तेल र प्रशस्त मात्रामा मसालामा टस बनाउनुहोस्।
पन्नीको साथ प्यान लाइन गर्नुहोस् र र्याक थप गर्नुहोस्। रैकमा कुखुरा (छालाको छेउमा) राख्नुहोस्।
बेक गर्नुहोस् जब सम्म कुखुरा १ 165 ° एफ मा पुग्न सक्तैन।
कहिलेसम्म चिकनका फिकाहरू बनाउन
कुखुराको फिलामा पकाएको हड्डीलाई उच्च तापक्रममा लगभग minutes 35 मिनेट बेकि time समय आवश्यक पर्दछ। रस बेस्सरी नभएसम्म तिनीहरूलाई बेक गर्नुहोस्, र हड्डीमा कुनै गुलाबी हुँदैन। दिमागमा राख्नुहोस् कि हड्डी रहित छालाविहीन कुखुराको फिलामा लगभग १० मिनेट कम समय चाहिन्छ।
Ick 350० ° एफ मा ick०-55 मिनेटमा कुखुराको जांघ
5 375 ° एफ मा ick 45-50० मिनेटमा कुखुरा जांघ
Ick०० ° F मा ick०-4545 मिनेटमा कुखुराको जांघ
Ick२5 ° एफ मा ick 35-40० मिनेटमा कुखुराको जांघ
कुखुराको जांघ आकारमा भिन्न हुन सक्दछ त्यसैले कुनै समयमा कुनै पनि कुखुरा पकाउँदा मासु थर्मामिटर प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो। कुखुराको लागि सुरक्षित पकाउने तापमान १55 ° एफ छ।
पोच गरिएको चिकन कसरी बनाउने - क्रेडेड वा सलादका लागि उत्कृष्ट!
ओभन पकाइएको चिकन स्तनहरू - सरल र स्वस्थ
Crockpot Shredded चिकन
कसरी कुखुरा उमाल्ने
सजिलो ग्रील्ड चिकन स्तन - अति सजिलो
तयारी समय१० मिनेट कुक समय35 मिनेट कुल समयचार मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन बेक्ड चिकनको फिलाले स्वादिष्ट र सरल मुख्य पकवान बनाउँदछ। फिलामा धेरै कोमल गाढा मासु स्वाद छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢6 हड्डी-मा कुखुराको फिला छालाको साथ (लगभग 5--6 औन्स प्रत्येक)
▢२- चम्मच कुखुराको मसाला वा इटालियन मसाला
He२5 डिग्री सेल्सियसको लागि तापो ओभन। पन्नीको साथ प्यान लाईन गर्नुहोस् र शीर्षमा बेकिंग र्याक राख्नुहोस्।
कागज तौलियाको साथ ड्याब चिकन छाला सुख्खा कुनै नमी हटाउन।
भद्राक्षको तेल र मौसममा मौसम, नुन र कालो मिर्चको साथ बर्षाको कुखुरा।
र्याकमा राख्नुहोस् र-35-40० मिनेट वा बेक गर्नुहोस् जबसम्म कुखुरा १ 165 ° एफ मा पुग्न सक्तैन।
२- 2-3 मिनेट ब्रिल गर्नुहोस् क्रिष्ट गर्न यदि आवश्यक छ भने।
क्यालोरिज:8 358,प्रोटिन:२g,मोटो:२g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:१1१मिलीग्राम,सोडियम:१११मिलीग्राम,पोटासियम:२ 6मिलीग्राम,भिटामिन ए:१२०IU,क्यालसियम:पन्ध्रमिलीग्राम,फलाम:१.१मिलीग्राम
कीवर्डपकाएको कुखुराको फिला कोर्सकुखुरा, डिनर, एन्ट्री पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।